June 4, 2021 - ApannPyay Media
June 4, 2021 by ApannPyay Media
သင်္ဘောပင် စိုက်တဲ့အခါ အမ ပင်ပဲ ဖြစ်လာစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေး ပထမ အဆင့် 1. အသီး​၏အောက်ပိုင်းအခြမ်းမှ အစေ့များကိုယူပါ။ ဒုတိယအဆင့် 2. အစေ့များကိုရေစိမ်၍ ရေပေါ် ပေါ်လာသောအစေ့များကိုဖယ်ပါ။ ရေပေါ် ပေါ်သော အစေ့များသည် ကျန်းမာစွာသီးနိုင်ဖို့အခွင်းရေးနည်းပါသည်။ 3. ကျန်သောအစေ့များကို ရေစစ်ပါ။ သတိ: နေရောင်ဖြင့်အ​ခြောက်မခံရပါ။ နေရောင်ဖြင့်အခြောက်ခံလျှင် အားနည်းသောပျိုးပင်များဖြစ်တတ်ပါသည်။ 4. ရေစစ်ထားသော အစေ့များကို အိုး၌တန်းစိုက်လျင်ပိုကျန်းမာသောအပင်ဖြစ်ပါမည်။ 5. ထိုနောက်အပင်ကို ရေလောင်းပေးပါ၊ နေရောင်ခြည်အောက်ထားပါ။ တတိယအဆင့် 6. ဒုတိယအဆင့်တွင် စိုက်က်ထားသောအပင် အရွယ်ရောက်လာလျှင် ပင်မ အမြစ်ကိုညှပ်ပါ။ 7. ညှပ်ပြီးသားအပင်ကို ပလက်စတစ် အိတ်ထဲတွင် တစ်ပတ် အရင်သိမ်းထားပြီး ရေနိုင်နိုင်လောင်းပေးပါ။ ၎င်းအဆင့်များလိုက်နာပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သင်္ဘောအမ ပင်ရရှိပါပြီ။ Credit – EFR … Read more
ညဘက်အိပ်တဲ့အခါ သွားရည်ကျတတ်တဲ့အကျင့်ကို ဘယ်လိုပြင်ယူကြမလဲ
ညဘက်အိပ်တဲ့အခါ သွားရည်ကျတတ်တဲ့အကျင့်ကို ဘယ်လိုပြင်ယူကြမလဲ ညဘက်အိပ်တဲ့အခါ သွားရည်ကျတတ်ရင် ညဘက်အိပ်တဲ့အခါ သွားရည်ကျတတ်တဲ့အကျင့်ကို ဘယ်လိုပြင်ယူမလဲ သွားရည်ကျတယ်ဆိုတာဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အာခံတွင်းထဲမှာ သွားရည်ပမာဏအမြာက်အမြားဖြစ်လာပြီး တခါတလေမှာ ပြုလုပ်တတ်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုမျိုးသွားရည်ကျတတ်တဲ့အကျင့်ဟာ ပုံမှန်နဲ့ အလွန်အကျွံဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ ရောဂါတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာ ပုံမမှန်တဲ့အခြေအနေမျိုး ဖြစ်နေပြီဆိုတာကို ပြသနေတဲ့ လက္ခဏာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီလိုမျိုးသွားရည်ကျရခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လိုအကြောင်းအရင်းတွေရှိနေမလဲ ရပ်တန့်အောင် ဘယ်လိုတွေလုပ်ဆောင်နိုင်လဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အခုပဲဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဘာကြောင့် သွားရည်ကျတာလဲ အိပ်စက်တဲ့အခါ ကျွနု်ပ်တို့ရဲ့ မျက်နှာကြွက်သားများဟာ အကုန်ပြေလျော့သွားပါတယ်။ သွားရည်ဆိုတာဟာ အိပ်နေတဲ့အချိန် ပါးစပ်ထဲမှာ စုပြုံလာတဲ့အတွက် အတန်ငယ်ဟနေတဲ့ ပါးစပ်နားမှနေပြီး အပြင်ဖက်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းစီးကျသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခေါင်းအုံးတွေမှာ သွားရည်တွေပေကုန်ပြီး ဘယ်လိုမှသက်သောင့်သက်သာအိပ်စက်လို့မရအောင်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သွားရည်အလွန်အကျွံစီးကျခြင်းဟာ အာရုံကြောဆိုင်ရာ ရောဂါတစ်ခုခုရဲ့ … Read more
ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုအစားအစာတွေ စားပေးသင့်သလဲ
ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုအစားအစာတွေ စားပေးသင့်သလဲ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်။ အစာလည်းဆေး ဆေးလည်းအစာပါပဲ။ ကျောက်ကပ်ဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အရေးကြီးဆုံး အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သွေးတွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေ အညစ်အကြေးတွေကို အပြင်ကို ပြန်ထုတ်ပေးတဲ့ စွန့်ပစ်ပေးနိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေးအတွက် သင်နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့ အစားအစာတွေထဲမှာ ဘာတွေထည့်စားသင့်သလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်ပါနော်။ ၁။ ရေသောက်ပါ ၂။ ဂေါ်ဖီ စားပါ ၃။ ငရုတ်ပွအနီသီးစားပါ ၄။ ကြက်သွန်နီ ၅။ ကညွတ် ၆။ ကြက်သွန်ဖြူ ၇။ ပန်းဂေါ်ဖီ ၈။ ပန်းသီး ၉။ ငါးအမျိုးမျိုး ၁၀။ ရွှေဖရုံစေ့ ၁၁။ သံပယိုရည် ၁၂။ ဘလူးဘယ်ရီ ၁၃။ စတော်ဘယ်ရီ ၁၄။ ချယ်ရီသီး ၁၅။ စပျစ်သီး ရှောင်ရန် ကျောက်ကပ်သမားတွေ … Read more
ရေခဲသေတ္တာတွေ၊ အဲကွန်းတွေပျက်တိုင်း Gasကုန်တယ်ဆိုပီး အလိမ်ခံနေရသူများအတွက် ရေခဲသေတ္တာတွေ၊ အဲကွန်းတွေမှာ ဂတ်စ် ကုန်တယ် ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ သုံးလိုက်လို့ ကုန်သွားတယ် ဆိုတာမရှိပါဘူး။ အချိန် ကြာလို့ ကုန်သွားတယ် ဆိုတာ မရှိပါဘူး။နေရင်းထိုင်ရင်း ကုန်သွားတယ် ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ တစ်သက်လုံးသုံး တစ်သက်လုံး မကုန်ပါဘူးတဲ့မီးဖို gas တွေလို ဖောက်ထုတ် မီးရှို့ ပစ်တာ မဟုတ်လို့ ကုန် သွားစရာ အကြောင်းမရှိ ပါဘူး။ ဘေဘီလည်းခံရပါများလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီ ရေခဲသေတ္တာ၊ အဲကွန်းတွေမှာ သုံးတဲ့ Gas ဂတ်စ် ဆိုတာ refrigerant လို့ခေါ်တဲ့ အအေးပြု ဓာတ်ငွေ့ တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ် ဒီ refrigerant ( အအေးပြု ဓာတ်ငွေ့ ) … Read more
စီးပွားရေးမှာ အပြိုင်အဆိုင်ရှိရင် လာဘ်ရွှင်စေရန်
စီးပွားရေးမှာ အပြိုင်အဆိုင်ရှိရင် လာဘ်ရွှင်စေရန် အပြိုင်အဆိုင်ကိုနိုင်၍ လာဘ်ရွှင်စေသော အစီအရင် လူတို့သည် ရာထူးအပြိုင်အဆိုင်၊ လုပ်ငန်းအပြိုင်အဆိုင်၊ စီးပွားရေးအပြိုင်အဆိုင်၊ တရားတပေါင် အပြိုင်အဆိုင် မှစ၍ အပြိုင်အဆိုင် အမျိုးမျိူး ရှိကြ၏။ ထို့အတူ မိမိအား ရန်လိုသူအမျိုးမျိုး လည်းရှိနိုင်၏။ ဖော်ပြထားသော ဂါထာသည်။ ရှေးလူကြီးများ အသုံးပြုသော အပြိုင်အဆိုင် ကို နိုင်နင်းသည့် ဂါထာဖြစ်၏။ အပြိုင်အဆိုင် မရှိ၍ ရွတ်လျှင် တစ်နေ့လျှင် (၇) အုပ် ရွတ်၍ (၇) ရက်ပြည့်အောင်ရွတ်လျှင် စီးပွားဥစ္စာ တိုးတက်သည်ဟု ရှေးလူကြီးတို့ အမှာရှိ၏။ ဖယောင်းတိုင် (၇) တိုင်တွင်ပတ်၍ (၇) အုပ်မန်းပါ။ (၇) ရက်တိတိ မီးထွန်းပါ။ သင်အလို ရှိသော ဆန္ဒများ ပြည့်စုံသွားပါလိမ့်မည်။ အချိန်မရွေးရွတ်ဖတ်နိုင်စေရန် ဖုန်းထဲမှာ … Read more
သနပ်ခါးလူးလေ့ရှိသူတိုင်း သိထားသင့်သည့် သတိပြုဖွယ် အချက်တချို့
သနပ်ခါးလူးလေ့ရှိသူတိုင်း သိထားသင့်သည့် သတိပြုဖွယ် အချက်တချို့ မေမေ ပြောပြတဲ့ ပျိုမေ တို့အကြိုက် သနပ်ခါး ကျောက်ပျဉ် သနပ်ခါး ကျောက်ပြင် အသစ်ဆိုရေလေးဆေးလိုက်ပြီးသနပ်ခါး တုံးသွေးထည့်လိုက်တာပဲအဲသလိုလုပ်လို့မရပါဘူး ။ ကျောက်သား အစစ်ကိုထွင်းထားတဲ့ ကျောက်ပျဉ် ဖြစ်ဖြစ် ဘိလပ်မြေ လိုမျိုးကိုပုံပြု့ထားတဲ့ကျောက်ပျဉ်ဖြစ်ဖြစ်ပထမဦးဆုံးအသုံးမပြု့ခင်မှာ … ဝယ်လာတဲ့ကျောက်ပျဉ်ကိုရေစင်စင်ဆေးပြီး ကျောက်ပျဉ်ကိုရေပုန်းထဲကိုထည့်ပြီးရေနဲ့တစ်ညစိမ်ထားပါ ။ နောက်တစ်ရက်မှာနနွန်းတက်နဲ့ + ဆားနဲ့ကိုသွေးပြီးတစ်နေကုန်နေလှမ်းထားရပါတယ်ဆီခြောက်တော့မှ … သနပ်ခါးကျောက်ပျဉ်ကိုရေထပ်ဆေးပြီးမှမိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ သနပ်ခါးတုံး ကိုသွေးရပါတယ်ထွက်လာတဲ့ သနပ်ခါး ကလေးတွေကညက်နေပြီးတနေကုန်ပါးပြင်ပေါ်အရာထင်နေပါတယ်တဲ့ကဲ ကျောက်ပျဉ်အ သစ်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြု့ရသလဲဆိုတာသိသွားပြီပေါ့ မေမေပြောပြတယ်ကျောက်ပျဉ်ပေါ်သနပ်ခါးသွေးတာလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလုပ်တာနဲ့တူတူပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ်ချသွေးရတာမဟုတ်ပဲမိမိခါးအလည်လောက်အမြင့်ရှိတဲ့နေရာမှာထားပြီးသွေးရမယ်တဲ့သနပ်ခါး ကိုအားစိုက်သွေးနေရတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတယ်လို့မထင်ရပေမဲ့နှစ်နဲ့ချီပြီးနေ့စဉ်သွေးနေရတော့လက်မောင်းကြွက်သွားတွေက ပိုပြီးသန်မာတယ် … ပျော့ပြီးရွဲကျခြင်းမျိုးမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘယ်ညာတော့လှည့်သွေးပေါ့တဲ့ ငရုပ်သီးထောင်း တာလဲအတူတူပဲတဲ့ခေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ ရေအိုး ရွက်တာပါတဲ့ မေမေ အ(အဖွားပြောပြတာလို့ပြောတယ် … ။ မေဇင် သနပ္ခါးလူးေလ့ရွိသူတိုင္း သိထားသင့္သည့္ သတိျပဳဖြယ္ အခ်က္တခ်ိဳ႕ ေမေမ … Read more
ကင်ဆာနှင့် နှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်ပေးသည့်အပြင် အရိုးတွေကိုပါကျန်းမာသန်စွမ်းစေတဲ့ ဗန်ဒါစေ့
ကင်ဆာနှင့် နှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်ပေးသည့်အပြင် အရိုးတွေကိုပါကျန်းမာသန်စွမ်းစေတဲ့ ဗန်ဒါစေ့ သင့်ကို ငယ်ငယ်က လူကြီးသူမတွေက ရေစိမ်ထားတဲ့ ဗန်ဒါသီးစေ့ကို စားခိုင်းတာ ဘာကြောင့်လဲလို့ထင်ပါသလဲ။ ရေစိမ်ထားတဲ့ ဗန်ဒါသီးစေ့မှာ သင်ထားတာထက်ပို အာဟာရတွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ သူ့မှာ အရေးကြီး ဗီတာ မင်နှင့်သတ္တုဓာတ်တွေ အများကြီး ပါဝင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဗန်ဒါစေ့တွေကို ရေစိမ်ခိုင်းတာလဲ..? ခြောက် သွေ့နေ တဲ့ ဗန်ဒါ အစေ့မှာ အပင်ပေါက်ဖို့အတွက် အစိုပြန်မှုများမှ ကာကွယ်ထားတဲ့ အင်ဇိုင်းများရှိနေပါတယ်။ ဗန်ဒါစေ့ကို ရေထဲမှာ စိမ်လိုက်ရင်တော့ အဲ့ဒီ အင်ဇိုင်းများ မရှိတော့ပါဘူး။ရေစိမ်ထားတဲ့ ဗန်ဒါစေ့များက အစာခြေရတာ ပိုပြီး လွယ်ကူစေပြီး အစာခြေစနစ်ကို အားကောင်းစေတဲ့ အဟာရဓာတ်တွေလည်း အများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ တစ်ည လောက်ရေစိမ်ထားတဲ့ ဗန်ဒါစေ့များက တခြား ခြောက်သွေ့နေတဲ့ ဗန်ဒါစေ့များထက်ပိုပြီး အဟာရဓာတ်ပိုများပြီး … Read more
နေ့တိုင်းသုံး တဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ကို ရေနွေး စိမ်ကြည့်လိုက်သော အခါ..(အားလုံးပဲ သတိထား ကြပါ) မြန်မာပြည်က ငွေစက္ကူများ။အိတ်ကပ်ထဲကအန္တရာယ်ကောင်။ သူတို့ဆီကနေလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် က ကူးမယ်ဆိုတာ မယုံစရာမရှိပါဘူး။ ပိုက်ဆံပေါ်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က ၉ ရက်လောက် နေနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်…. ခုပို က်ဆံတွေဆိုရင် သိပ်ပြီးညစ်နွမ်းနေတာတွေ မပါသေးပါဘူး။ ဒါတောင်ရေနွေးနဲ့စိမ်လိုက်တာမှာ အဲ့လောက်ညစ်နေပါတယ်။ ငွေကိုလက်နဲ့မကိုင်ပါနဲ့…။ ပြန်အမ်းငွေမကိုင်ရအောင် ကို‌ယ်ပေးတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ အစွန်းထွက်မလိုအပြတ်ဝယ်တာပိုကောင်းပါတယ်…။ ကိုယ်ဝယ်တာ 2700 ဆိုရင် 3000ဖိုးအပြည့် တခုခုဝယ်လိုက်တာမျိုးပေါ့။ တတ်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့ cashless သွားပါ။ ခုလောလောဆယ် အိမ်ထဲတင်မက အိပ်ကပ်ထဲပါ ဝင်နေတဲ့ အန္တရာယ်ကောင်ပါ…။ ။ ခရက်ဒစ် ေန႔တိုင္းသုံး တဲ့ ပိုက္ဆံေတြ ကို ေရေႏြး စိမ္ၾကည့္လိုက္ေသာ အခါ..(အားလုံးပဲ သတိထား … Read more
နောင်ဘဝများ၌ ရုပ်အဆင်း အင်္ဂါတင့်တယ်လှပပြီး ကျန်းမာ ချမ်းသာကြွယ်ဝမည့်သူ (၉)မျိုး
နောင်ဘဝများ၌ ရုပ်အဆင်း အင်္ဂါတင့်တယ်လှပပြီး ကျန်းမာ ချမ်းသာကြွယ်ဝမည့်သူ (၉)မျိုး ၁။ ဘုရားပန်းကို အမြဲတမ်း သဒ္ဒါထက်သန်စွာကပ်လှုသောသူ ၂။ဘုရားသောက်တော်ရေ အမြဲမပြတ်ကပ်လှုသောသူ ၃။သောက်ရေအိုးစင်လှုသောသူ၊ရေလှုသောသူ ၄။ ဘုရား ၊ရဟန်းတို့အား သက်န်းကပ်လှုသောသူ ၅။စတုဒိသာ ကျွေးသောသူ ၆။ဘုရားကျောင်းတွင် တံမြက်စီး အမြဲလှဲ၍သန့်ရှင်းစေသောသူ ၇။မရှိဆင်းရဲသားများအား ပေးကမ်းသောသူ ၈။ဘုရားကျောင်းဆောက်ရာတွင် ငွေအားလှုသောသူ၊လုပ်အားလှုသောသူ ၉။ရဟန်းများအား ဆွမ်းလောင်းလှုသောသူတို့ဖြစ်လေသည်။ Credit ေနာင္ဘဝမ်ား၌ ႐ုပ္အဆင္း အဂၤါတင့္တယ္လွပၿပီး က်န္းမာ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမည့္သူ (၉)မ်ိဳး ၁။ ဘုရားပန္းကို အျမဲတမ္း သဒၵါထက္သန္စြာကပ္လႈေသာသူ ၂။ဘုရားေသာက္ေတာ္ေရ အျမဲမျပတ္ကပ္လႈေသာသူ ၃။ေသာက္ေရအိုးစင္လႈေသာသူ၊ေရလႈေသာသူ ၄။ ဘုရား ၊ရဟန္းတို႔အား သက္န္းကပ္လႈေသာသူ ၅။စတုဒိသာ ေကၽြးေသာသူ ၆။ဘုရားေက်ာင္းတြင္ တံျမက္စီး အျမဲလွဲ၍သန႔္ရွင္းေစေသာသူ ၇။မရွိဆင္းရဲသားမ်ားအား ေပးကမ္းေသာသူ ၈။ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္ရာတြင္ ေငြအားလႈေသာသူ၊လုပ္အားလႈေသာသူ … Read more
ဖုန်း အလွန်အကျွံ့ စွဲလမ်းခြင်းတွေဖြစ်လာရင် မဖြစ်မနေသိထားရမယ့်အရာများ
ဖုန်း အလွန်အကျွံ့ စွဲလမ်းခြင်းတွေဖြစ်လာရင် မဖြစ်မနေသိထားရမယ့်အရာများ ဖုန်းတွေဟာ အချက်အလက် တွေကို ရယူဖို့ ကိရိယာတစ္ခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာထက် ပိုလာပါတယ် ။ သင်ကိုယ်တိုင် ဖုန်းတစ်လုံး မရှိရင် မနေနိုင်ဘူး နေ့တိုင်း ဖုန်းနဲ့အချိန်ကုန် အိပ်လည်းဖုန်း စားလည်းဖုန်း သင့်ဘဝရဲ့မရှိမဖြစ်အရာတစ်ခုလို ခံစားနေရပီဆို သင် ဖုန်းအစွဲလွန် ရောဂါရနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ Nomophobiaလို့ခေါ်တဲ့ no mobile phone phobia ဆိုတဲ့ရောဂါကို လူတော်တော်များများရနေကြပြီလို့ဆိုပါတယ် ။ နယူးယောက်တိုင်မ်း သတင်းစာအဆိုအရ ဆယ်ကျော်သက်တွေနဲ့လူကြီးတွေက သူတို့ဖုန်းတွေကို တစ်နေ့မှာ အကြိမ်၂၀ လောက်ကြည့်ကြပြီး စာသားမက်ဆေ့ ၁၁၀ ခန့်ပေးပို့တတ်ကြပါတယ်။ အမေရိကန်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်တမ်းတွေအရ လူဦးရေ ၂၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်က အင်တာနက်စွဲလမ်းခြင်းပြဿနာတက်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လူဦးရေ ၅၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ သူတို့ဖုန်းတွေမရှိပဲ ရှင်သန်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ခုပြောပြချင်တာက … Read more